घर अमेरिकी स्टेर्स लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। क्रेडिट: RawFIFA95 र इंस्टाग्राम
LB उपनामको साथ एक फुटबल जीनियसको पूर्ण कथा प्रस्तुत गर्दछ "कोलम्बियाई रोनाल्डो"। हाम्रो लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको मितिमा तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
Luis Muriel को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट्स: इन्स्टाग्राम र फुटबल रेटेड।
विश्लेषणमा उनको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्याङ्क, जीवन शैली र उहाँका बारेमा अन्य ज्ञात तथ्यहरू वृद्धि गर्न समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ जादुई गोल गर्ने र आफ्नो टीमका साथीहरूको लागि स्कोरिंग अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्षमताको बारे। यद्यपि, केहि थोरैले लुइस मुरिएलको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
सुरू गर्दै, लुइस फर्नांडो मूरिएल फ्रुटो कोलम्बियाको सान्टो टोम्सको नगरपालिकामा अप्रिल १ 16 1991 १ को १ 40 औं दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, इलिजाबेथ फ्रुटो र उनको बुबा लुइस म्यूरीएल श्रीको जन्म भएको थियो। तल लुइस मुरिएलका अभिभावकको फोटो छ जुन their० को उमेरमा देखा पर्दछ।
लुइस मुरिएल माता-पिता लुइस सेर र एलिजाबेथ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
दक्षिण अमेरिकी परिवारको मूलको साथ ल्याटिनो जातीयताको कोलम्बियाको नागरिकता सान्तो तोम्सको उनको जन्मस्थलमा हुर्काइएको थियो जहाँ उहाँ आफ्ना भाइहरू, लुइस अल्बर्टो र येशूसँगै हुर्कनुभयो।
लुइस मुरिएल सान्टो टोमसमा आफ्नो जन्मस्थलमा हुर्केका थिए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
सान्तो टोमेसको तल्लो वर्गको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका युवा लुइस5बर्षको मात्र थिए जब उनले आफ्नो परिवारको घरबाट टाढा नहुने स्थानीय पिचमा फुटबल खेल्न सुरु गरे।
"उनी फुटबलको बारेमा उत्पादक रूपमा बेचैन थिए जुन उनको बिहानको खाजा, खाजा र बेलुकाको खाना बने। अझ चाखलाग्दो कुरा के भने यो हो कि उसलाई व्यावसायिक मात्र नभई एक महान पेशेवर बन्नको भोक पनि थियो। ”
एक घनिष्ठ परिवार मित्र - Humberto Barrera सम्झियो।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
धेरै समय नबित्दै मुरिएलले सान्तो टोमस (सेन्ट थॉमस) को स्कूल टीमसँग प्रशिक्षण सुरु गरे जहाँ उनले प्रतिस्पर्धी फुटबलको आधारभूत कुराहरू अध्ययन गरे। त्यस पछि, एक १०-वर्षीय मुरिएल एथलेटिको जुनियरको युवा प्रणालिहरूमा सामेल भए जुन शहरको सब भन्दा ठूलो टोली थियो र आफ्नो बाल्यकाल सपनाहरूको सम्भावनाहरूको लागि सतर्क भयो।
लुइस मुरिएलले आफ्नो क्यारियरको निर्माण सान्तो टोमको स्कूलमा शुरू गरे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यद्यपि, मूरिएलले एथलेटिको जुनियरमा प्रशिक्षणको सामना गर्नुपरेका थिएनन् किनभने उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। नतिजा स्वरूप, उहाँ आफ्ना दाजुभाइहरू र आफ्नी हजुरआमाले बनाउनुभएको कासावा बनहरू बेच्न आफ्ना भाइहरू र भाईहरूसँग सम्मिलित हुनुभयो र एथलेटिको जुनियरमा प्रशिक्षण खर्च खर्चमा बिक्रीबाट आर्जित मुनाफाको एक हिस्सा प्रयोग गर्नुभयो।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
के तपाईंलाई थाहा छ एथलेटिको जुनियरको स्तरबाट मुरिएलको वृद्धि लगभग १aवर्षको हुँदा फुटबलमै हार मान्ने गम्भीर चोटपटकले गर्दा क्षतिग्रस्त भयो? स्वस्थ भएपछि, मूरिएललाई खेलमा फर्कने आफ्नो पूर्व प्रशिक्षकले विश्वस्त तुल्याए र उनी एक राष्ट्रिय टूर्नामेन्टमा एथलेटिको जुनियर शीर्ष स्कोरर भए।
मुरिएल १ 17 वर्षको उमेरमा, उनी डेपोर्टिभो कैलीमा सामेल भए जहाँ उनले आफ्नो व्यवसायिक जीवन शुरू गरे। यो क्लबमा थियो कि फुटबल फुटबलले प्रभावशाली गोलहरू र तारकीय प्रदर्शनहरू हटायो जसले उनलाई "कोलम्बियन रोनाल्डो" उपनाम प्राप्त गर्‍यो। निक पूर्व ब्राजिल स्ट्राइकरको तुलनामा थियो रोनाल्डो डी लिमा जो उहाँ निस्सन्देह एक शारीरिक समानता संग साझा।
डेपोर्टिभो क्यालीमा, जवान मुरियललाई पछि "कोलम्बियाई रोनाल्डो" उपनाम दिइयो रोनाल्डो डी लिमा तिनीहरूको हडताल समानता को कारण। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र मार्का।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
डेपोर्टिभो कैलीको साथ आफ्नो पहिलो सत्रमा, म्युरिएलले इटालियन साइड उडिनिसको ध्यान खिचे जसले २०१० मा उनको सेवाहरू सुरक्षित गर्‍यो र उनलाई दुई सत्रहरूको लागि loanण दिए, पहिलो ग्रानडा र त्यसपछि लेसे। यो अवधि म्यूरेलको लागि धेरै जटिल थियो जोसँग नयाँ संस्कृति, खाना, व्यक्ति र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यूरोपीयन फुटबलको बानी बसाउन कठिन समय थियो।
जब युवा स्ट्राइकरले अन्ततः आफ्नो tenण अवधि पूरा गरे र उडिनिस फर्के, उनी अधिक तौल बन्न पुगेका थिए र २०१२/२०१ season सिजन शुरू हुनुभन्दा अघि नै फ्याट बहाल्ने कष्टदायी अनुभवबाट गुज्रिएको थियो। मुरिएलले अर्को सत्रमा फारममा तीब्र गिरावट रेकर्ड गरे जसरी उनी फेरि वजनको मुद्दाहरूसँग स .्घर्ष गर्दै थिए र एक चोटि चोट पुर्याए।
चोटपटक सम्बन्धीत संकटको बीचमा फुटबल खेल्ने रमाइलो गर्न कडा परिश्रम गरिरहेका एक अधिक वजन वाले मूरिएल। छवि क्रेडिट: ESPN
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
२०१ 2015 को सिजनको शुरुआत सम्म यो थिएन कि मुरिएलको भाग्य राम्रो हुन थाले जब उनी loanणमा सम्पादोरियामा सामेल भए र क्लबसँग स्थायी सम्झौता कायम गर्न आफै अघि बढिरहे।
लेखनको समयसम्म अगाडि, म्युरिएल इटालियन साइड अटलान्टा (मार्ग सेभिला र फिरेन्टीना) का लागि प्रमुख स्ट्राइकर हो जहाँ उनीसँग १ats पटकमा १० गोलको प्रभावशाली रेकर्डको साथ उनका लागि राम्रोसँग बोल्ने आँकड़े छन्! बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
लुइस मूरिएलले अटलान्टामा प्रभावशाली तथ्या with्कहरूसहित आफ्नो ठाउँ कमाएको छ जुन केवल अझ राम्रो देखिन्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
मुरिएलको क्यारियर उतार चढावबाट टाढा, उनको प्रेम जीवन सबै समय उच्च छ जबदेखि उसले आफ्नो सुन्दर प्रेमिका बनेकी पत्नी, पाउला रेन्तेरियासँग विवाह गरे। दम्पतीहरूले डेटि began गर्न थाले र विवाह गरे त्यसबारे धेरै कुरा थाहा छैन तर पाउला रेन्टेरियासँग विवाह हुनु अघि म्युरिलको अघिल्लो प्रेमिका थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन।
पाउला एक सुन्दर पत्नी मात्र होइन, म्युरिएलको नम्बर एक प्रशंसक हो। म्युरिएलले पाउलालाई न्यानो मनपराउँछिन् र कहिलेकाँ उनलाई उसको लक्ष्यहरू समर्पण गर्दछन्। उनीहरूको विवाह लिखित समयमा तीन प्यारी केटीहरु संग आशीर्वाद छ तिनीहरू मा मारिया Camila, मारिया पाउला र मारिया सेलेस्ट समावेश छ।
लुइस मुरिएल आफ्नी पत्नी पाउला रन्तेरिया र तीन छोरीहरूसहित। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
लुइस मुरिएल पारिवारिक जीवनमा सर्दै, फुटबल प्रतिभा परिवारमा ठूलो छ र उहाँ मायालु र सहयोगी परिवार पाएकोमा धन्यवादी भएको स्वीकार्न कहिल्यै छोड्नुहुन्न। यस खण्डमा, हामी तपाइँलाई लुइस मुरिएल परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा बुबाआमाबाट शुरू गराउँदछौं।
लुइस मुरिएल बुबाको बारेमा: लुइस मुरिएल श्री फुटबल प्रतिभाको बुबा हो। उनले स्ट्राइकरको प्रारम्भिक जीवनको क्रममा ट्याक्सी चालकको रूपमा काम गरे र फुटबल प्रतिभाको जीवन र उदयको लागि धेरै सहयोगी थिए। त्यसकारण अचम्म मान्नुपर्दैन लुइसले आफ्ना बुवालाई ट्याक्सी किन्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए जब ऊ सानो थियो। जब उनले डेपोर्टिभो क्यालीमा पहिलो तलब पाउँदा उनले वर्षौंपछि आफ्नो वचन पूरा गरे। मुरिएलको सफलताका लागि धन्यबाद, उनका बुवाले अब काम गर्नुपर्दैन तर आफ्नो जेठो छोराको सफलतालाई सुनिश्चित गर्न आफूले गरेको त्यागको आनन्द लिन बाँचिरहेका छन्।
लुइस मुरिएल आमाको बारेमा: एलिजाबेथ फ्रुटो लुइस मुरिएलकी आमा हुन्। उनी लातिनो पारिवारिक जराबाट आफ्ना पति जस्तै छिन् र मुरिएल र उनका भाइबहिनीहरूलाई हुर्काउन मद्दत गर्छिन्। फुटबल प्रतिभा उनको मा चिच्याउन को लागी श्रेय दिन्छ - एक दोस्रो कोच जस्तै - आफ्नो खेल को शीर्ष मा रहन र घर ट्राफियां ल्याउन। इलिजाबेथले म्युरिएलको खेलहरू नभुल्न सम्भवको प्रयास गर्छिन्। बढी के? उनको बिना शर्त प्रेम सधैं फुटबल प्रतिभा सम्झना दिलाउँछ कि मातृ प्रेम प्रेमहीन छ!
लुइस मूरिएल आफ्ना सहयोगी अभिभावकहरूको साथ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लुइस मुरिएल भाई बहिनीहरूको बारेमा: लुइस मुरिएल आफ्ना बाबुआमामा जन्मेका जेठा छोरा हुन्। लुइस अल्बर्टो र येशू भनेर चिनिने उनका दुई भाई बहिनीहरू छन्। पूर्वले २०१ Dep मा Deportivo Cali मा फुटबलमा क्यारियर बनाउँदै थियो जबकि पछिल्लो यही अवधिमा पशु चिकित्सा औषधि पढ्दै थियो। मुरीएलका बाबुआमामा छोरी जन्मेको कुनै रेकर्ड छैन किनकि ती स्ट्राइकरका बहिनीहरू नभएको पक्षमा असमानता रहेको छ।
लुइस मुरिएल आमा बुबा आफ्ना भाइहरू येशू (धेरै बायाँ) र लुइस अल्बर्टो (दाँया) संग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लुइस मुरिएल आफन्तहरूको बारेमा: लुइस मुरियलको परिवारको जीवन विस्तार गर्दै, स्ट्राइकरको पुर्खाको कुनै रेकर्ड छैन विशेष गरी उसको बुवा हजुरबा हजुरआमा र हजुरआमा र हजुरआमाको। त्यस्तै, मुरिएल काका, काकी र काका-काकीबारे धेरै कुरा थाहा छैन, जबकि उनका बाजे र भतिजालाई यो बायो लेख्ने क्रममा चिन्न सकेको छैन।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
के तपाईंले कहिले सोच्नुभएको छ लुइस मुरिएललाई टिक बनाउनेले? के तपाईंले उनको अफ-पिच व्यक्तित्वको सार पत्ता लगाउन कडा मेहनत गर्नुभयो? त्यसोभए पढ्न जारी राख्नुहोस् जब हामी प्लेमेकरको व्यक्तित्वको बारेमा तथ्यहरू प्रकट गर्दछौं ताकि तपाईको पूरा चित्र प्राप्त गर्न तपाईलाई मद्दत गर्न। सुरू गर्नका लागि, म्यूरिएलको व्यक्तित्व मेष राशि चक्र हस्ताक्षर द्वारा निर्देशित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शन गरिएको गुण झल्काउँछ।
ऊ सहज, ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी भावनात्मक बौद्धिक हो र उसको निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू खुलासा गर्न कुनै समस्या छैन। स्ट्राइकरको रुचि र शौकमा फुर्सतको पैदल यात्रामा जानु, एकर्डियन खेल्नु, घोडा चढ्ने, स्कुबा डाइभिंग, पानीमुनि अन्वेषणका साथै परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
लुइस मुरिएललाई स्कूबा डाइभि and र पानीमुनि अन्वेषण मन पर्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
के तपाईंलाई थाहा छ लुईस मूरिएलको यो जीवनी लेख्दा the $ मिलियन भन्दा बढीको कुल सम्पत्ति छ। म्युरिएलको नेट वर्थका संस्थाहरूले तलब र मजदुरीमा फार्म लिन्छन् जुन उनले फुटबल खेल्नको लागि प्राप्त गर्दछन् जबकि उसको खर्च बानीहरूको विश्लेषणले उनी विलासितापूर्ण जीवनशैली बिताउँछन् भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ।
स्ट्राइकरको विलासी जीवनशैलीमा सूचकहरूले फिलिमा उनको सानो चिनिएको घर साथै विभिन्न क्लबहरूमा आफ्नो फुटबलको व्यापार चलाउँदा उनी बस्ने महँगो अपार्टमेन्टहरू समावेश गर्दछ। थप रूपमा, म्युरिएलसँग धेरै विदेशी कारहरू छन् जुन उसले विरलै फ्ल्यान्ट गर्दछ।
लुइस मूरिएलको एक दुर्लभ तस्बिरले आफ्ना कारहरू फ्लान्ट गर्दै। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो लुइस मुरिएल बाल्यकाल कहानी र जीवनी समेट्न, हामी स्ट्राइकरको बारेमा कम ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
ट्याटूहरू: Feet फिट १० इन्चको उचाईसहित लुइस मुरिएलको शरीरको माथिल्लो भागमा ट्याटूहरू छन्। स्ट्राइकरले अझै शरीरको मसीको पछाडिका अर्थहरू खुलाउन सकेको छैन, यद्यपि केहीले आफ्नो स्पष्टीकरणको रूपमा देखाउँछन् विशेष गरी उसको पछाडि क्रस।
लुइस मुरिएल ट्याटूको अवलोकन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धुम्रपान र मदिरा: कोलम्बियाको अन्तर्राष्ट्रियलाई कडा पेय पदार्थ सेवन गर्न दिइदैन, न त उनी लेख्ने समयमा धुम्रपानमा भेटिएका थिए। यस्तो स्वस्थ बानीका साथ, स्ट्राइकर फुटबल खेलाडीहरूको लिगमा सामेल हुन्छन् जसले तिनीहरूको स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन् र यसमा सम्झौता गर्न केहि पनि गर्दैन।
पालतू जनावरहरू: स्ट्राइकरले घरपालुवा जनावरहरू विशेष गरी कुकुरहरूलाई माया गर्छन्। उहाँ प्राय: तिनीहरूलाई बाहिर पैदल यात्रामा लैजानुभएको थियो वा उनीहरूसँग कारहरूमा सवारी हुँदा। कुकुरहरूलाई मनपराउन मन पराउनु पनि उनकी श्रीमती र बच्चाहरू द्वारा साझा गरिएको छ।
लुइस मुरिएल र उनको परिवार कुकुरहरू प्रेम गर्छन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धर्म: मूरिएल धर्ममा ठुलो छन् र प्रायः उनको विश्वासको दाबी गर्छन् जुन क्याथोलिक धर्मले पोषित छ। उनले एक अन्तर्वार्तामा भने कि उनी परमेश्वरमा विश्वास गर्दछन् र उनी भन्छन् कि उनको सम्पूर्ण परिवार भर्जिन मरियमप्रति अत्यन्त समर्पित छ र चर्चको शिक्षा अनुसरण गर्दछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
कोलम्बिया फुटबल डायरी
सेलिला फुटबल डायरी
Quincy Promes बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
विसाम बेन यर्डर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
डेभिन्सन सं्यानेच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
तर, उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
अन्डर सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
कार्लोस बेका बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
स्टीवन नोजोनी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
vannyhenrico - अप्रिल 6, 2020
vannyhenrico - अप्रिल 6, 2020 0
अप्रिल 6, 2020
6 सक्छ, 2018
सेप्टेम्बर 30, 2018
फेब्रुअरी 13, 2020
जुन 19, 2017
अक्टोबर 2, 2018
अगस्ट 3, 2018